चीनबाट यस्तो घटना सार्वजनिक : बच्चालाई कुखुराको र’गतको सुइ ! किन यसो गर्दैछन् चिनियाँहरू ? – Nep Stok
मंग्सिर २६, २०७८ आइतबार 342
चिनियाँहरू संसारभर नै आफ्नो विशेष खालको खानपानका लागि चिनिन्छन् । भनिन्छ चिनियाँहरू जुनसुकै चिजलाई पनि खाना बनाउन सक्दछन् । अहिले चीनमा एउटा यस्तो घटना सार्वजनिक भएको छ, जसले निकै चर्चा कमाइरहेको छ । चीनमा मानिसहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई कुखुराको र’ग’तको सुई लगाइदिने गरेका छन् ।
बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या नआउन् भनेर कुखुराको रगतको इन्जेक्सन लगाउने गरिएको हो । आफ्ना सन्तानलाई सुपर बच्चा बनाउने लहडमा अभिभावकहरूले यस्तो जोखिमपूर्ण तथा घातक काम गरिरहेका छन् ।
एक रिपोर्ट अनुसार चीनमा बालबालिकाको आँखा कमजोर हुने गरेको छ र माध्यमिक विद्यालयका करीब ७१ प्रतिशत र हाइस्कुलका ८१ प्रतिशत विद्यार्थीको दृष्टि कमजोर रहेको छ । अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सबै कुरामा अब्बल बन्नका लागि द’बा’ब दि’ने च’ल’नले गर्दा किशोर किशोरीहरुमा डि’प्रे’सनको समस्या पनि बढ्न थालेको छ । एक रिपोर्ट अनुसार चीनमा २५ प्रतिशत चिनिया किशोर किशोरीहरु डि’प्रे’सनबाट पीडित छन् । एजेन्सी
Prevफुटबल बादशाह म्याडोनाको हराएको घडी असाममा भेटियो, भारतीय नागरिकले चोरेको खुलासा
Nextयिनै हुन् कक्षा १२ मा नेपाल टपने २ बिद्यार्थी अर्की नेपालकै दोश्रो
त्यो दिन अर्जुन र साथीहरु मिलि चाउचाउ खादै जङ्गल पुगे त्यसपछि … (भिडियो सहित)